रेसलमेनियामा ब्रोक लेसनरको कीर्तिमान के हो? - Wwe
रेसलमेनियामा ब्रोक लेसनरको कीर्तिमान के हो?
#8 ब्रोक लेसनर बनाम ट्रिपल एच: रेसलमेनिया २
HHH बनाम Lesnar
ट्रिपल एच बनाम ब्रोक लेसनर २०१२ मा फर्किए पछि पहिलो रेसलमेनिया म्याच थियो। यो मुकाबला लेसनर र ट्रिपल एच को बीच एक लामो समय को दुश्मनी को परिणाम थियो। ट्रिपल एच र उनको परिवार को लागी।
WrestleMania को निर्माण को समयमा, जानवरले विन्स म्याकमोहन मा आक्रमण गरे। चाँडै, लेसनर र ट्रिपल एच बीच एक नो होल्ड्स ब्यारेड म्याच रेसलमेनिया २ for को लागी बुक गरीएको थियो। ट्रिपल एच लाई पनि यो प्रतियोगिता को लागी लाइन मा आफ्नो क्यारियर राख्नु परेको थियो।
कति अग्लो चिप फिक्सर माथिल्लो हुन्छ
ट्रिपल एच बनाम ब्रोक लेसनर नो होल्ड्स बाधा, लाइन मा ट्रिपल एच कैरियर। रेसलमेनिया २
- Fazcoasters (azFazcoasters) मार्च १, २०२१
यो सबै समय को सबै भन्दा शारीरिक WrestleMania खेलहरु मध्ये एक थियो। दुबै सुपरस्टारले एक अर्कालाई दुखाइको लागी नो होल्ड्स ब्यारेड शर्तको सबैभन्दा राम्रो उपयोग गरे। शॉन माइकल्स पनि आफ्नो साथीलाई मद्दत गर्न म्याचमा सामेल भए।
बाउटको अन्तिम क्षणमा ट्रिपल एच लेसनरलाई एक वंशावली संग इस्पात को चरण मा विजय हासिल गर्न को लागी देखे। यो लेसनर को कुश्ती क्यारियर को सबैभन्दा आश्चर्यजनक घाटा मध्ये एक थियो र केहि समय को लागी उनको चरित्र को विश्वसनीयता लाई क्षति पुर्‍यायो।
विजेता: ट्रिपल एच
के कसैलाई ध्यान खोज्ने बनाउँछ
#Bro ब्रोक लेसनर बनाम द अंडरटेकर: रेसलमेनिया ३०
अन्डरटेकरको रेसलमेनिया स्ट्रीक एक आश्चर्यजनक अन्त्यमा आयो
रेसलमेनिया ३० मा, ब्रोक लेसनरले अन्डरटेकर संग युगहरु को लागी एक संघर्ष मा लडे। प्रतियोगिता अघि, लेसनरले दावी गरे कि उनी डेडम्यान को पवित्र लकीर लाई जितेर अकल्पनीय गर्न जाँदै थिए।
WWE ब्रह्माण्ड लेसनरलाई पत्यार लाग्दैन। उनीहरूले सोचे कि लेसनर अर्को सुपरस्टार हुनेछन् शोकेस अफ इमर्टाल्स मा अन्डरटेकरको बिरुद्धमा। जे होस्, WWE त्यो रात को लागी स्टोर मा अन्य योजनाहरु थिए।
२० भन्दा बढी मिनेट हिंसात्मक हिंसा पछि, ब्रोक लेसनरले अन्डरटेकरमा तेस्रो F5 लाई निष्पादित गरे। उहाँ चाँडै कभर को लागी जानुभयो र सफलतापूर्वक तीन-गिनती को लागी डेडमैन पिन गर्नुभयो, सबैको आश्चर्य को लागी।
सम्पूर्ण सुपरडोम क्षेत्र स्तब्ध स्थितिमा गयो जब रेफ्रीले तेस्रो पटक रिंग म्याट ट्याप गरे। यो तर्कसंगत सबै समय को सबैभन्दा आश्चर्यजनक WrestleMania पल थियो। २१ रेसलमेनिया विजय पछि, अन्डरटेकर अन्ततः उनीहरु सबै को ग्रान्डेस्ट स्टेज मा हरायो।
को प्रतिक्रिया BrockLesnar मा अन्डरटेकर को जीत को सिलसिला (२१-०) मा तोड्दै #रेसलमेनिया ३० pic.twitter.com/nYGYTeZAQo
- ईएसपीएन (pespn) मार्च २३, २०२०
फेनोम मा यो जीत ब्रोक लेसनर को WWE मा सबैभन्दा प्रभावशाली बल को रूप मा स्थापित भयो। यो उनको कुश्ती क्यारियर को एकदम सही आकर्षण बन्यो, किनकि उनी रेसलमेनिया मा अन्डरटेकर लाई हराउने पहिलो WWE सुपरस्टार बने।
कसरी विनम्रता एक मिति अस्वीकार गर्न
विजेता: ब्रोक लेसनर
कसरी तपाइँको जीवन राम्रो बनाउन को लागी
म कहिल्यै प्रेमी पाउने छैन
एक पुरुष र एक महिला को बीच रसायन शास्त्र को संकेत
काम मा यौन तनाव को संकेत
के गर्ने यदि कोहि तपाइँको पछाडि पछाडि कुरा गरीरहेको छ